Ebumnuche Onyeikpe Banyere Ndị Na-ege Ntị | Martech Zone
Tuesday, August 11, 2009 Sunday, Eprel 24, 2016 Adam Obere
Mgbe ị na-ekpebi ịkpọ aha, cheta ihe mere n'ụwa ugbu a, ọ bụghị etu ahụe si kee ihe. Nke a bụ ihe, mgbe ị na-ekwu ma ọ bụ na-egosi a aha echiche na onye na ebumnuche nke inweta ya Buy-na ma ọ bụ nzaghachi, ọ na-enweghị otu ahụmahụ na n'ji na ubi ga-enwe.
Mgbe ị na-ewetara aha echiche, gị ahịa ma ọ bụ onye otu ga-eme ka ya maara, ezi uche ụbụrụ na-arụ ọrụ. Ọ ga na-eche, "ọ masịrị m?" Omume a adabaghị na atụmanya ahụmịhe, ndị ahịa, ndị itinye ego, ndị ọrụ, ndị nyere onyinye, ndị ọrụ (na ihe ndị ọzọ) ga-enwe.
Ọzọkwa, buru n'uche na ọ bụ naanị ndị ụlọ ọrụ na-ere ahịa na azụmaahịa na-etinye oge dị ukwuu n'ịwepụta uru na ọghọm nke aha. Ọfọn, belụsọ ma aha ahụ adịghị njọ, ọ pụtara. Mgbe ahụ ị nwere ike ịhụ Joe Consumer ka ọ na-eri obere oriri njakịrị maka ego gị. Mana ọ bụrụ na aha gị dabara na atụmatụ ejiri mara nke ọma, atụmanya a na-atụ anya anaghị emefu otu millisecond na nkatọ ezi uche dị na ya.
Nke bụ eziokwu bụ na ndị mmadụ na-ahụ aha dị iche iche, na ọnọdụ mmetụta uche. Ka anyi kwuo na okwu igwe gi na-aga ihe dika:
Ndewo, a bụ m Jan Smith, onye nyocha injin nchọ na Gazillions. M na-enyere ndị mmadụ aka ịnyagharịa na weebụ mgbe ha na-achọ ụdị ozi dị mma.
Onye na-ege ntị anaghị eche echiche:
Aha ahụ masịrị m? Ọ bara uru? Onye ọ bụla hụrụ aha ahụ n'anya? Aha ahụ ọ na-agwa akụkọ niile banyere ụlọ ọrụ a.
Mba, onye na - ege ntị na - ahazi ihe niile ị gwara ya (ma eleghị anya na - enyocha gị maka njiri mara na ọ nwere ike ịtụkwasị gị obi mgbe ị na - agbaso ndepụta nke ihe 20 ọ kwesịrị ime ma emechaa ụbọchị ahụ.) Azụmaahịa gị ma ọ bụ aha ngwaahịa bụ nanị otu ntakịrị ntakịrị ihe ọmụma. Mgbe ụbụrụ nwudoro ya, ọ na-aga na-arụ ọrụ nyocha faịlụ dị n'ime maka aha nwere ike ịdị ka ma ọ bụ dị iche na na mmetụta uche metụtara. Brainbụrụ nwere ike ịdebanye aha ngwa ngwa dịka:
Gazillions. Nke ahụ dị ọtụtụ. Undsda ụdị fun. Ọ bụghị nkịtị. Enwere ike dị ize ndụ. Ga-ege ntị karịa.
Anaghị m ekwu aha ahụ adịghị mkpa. N'ezie, ọ bụ akụkụ dị oke egwu nke usoro akara akara gị. Aha ahụ na-ada ụda ma ọ bụ na-enye ozi ma ọ bụ ha abụọ. Dị ka akara ngosi ma ọ bụ nọmba ọ bụla ndị ọzọ metụtara, aha bụ ntinye aka na onyonyo na mmetụta ndị mmadụ ga-etolite gburugburu gị, ụlọ ọrụ gị, ngwaahịa na ọrụ gị.
Isi okwu m bụ n’ezie gbasara gburugburu ebe ejiri kepụta ihe. Ma ị na-eme ya n’onwe gị, na-arụ ọrụ na onye na-ahụ maka ndụmọdụ ma ọ bụ na ọ bụ onye ndụmọdụ, ị ga-enyerịrị nzaghachi gị site na ozi nke onye nata ozi. Ugbu a, biko, pụọ ma meere onwe gị aha dị ukwuu.
Tags: brandmbọnAha Ụlọ Ọrụahaakpọ ahangwaahịa aha
M gaara enwe nzaghachi dị iche na nke a tupu m gụọ Blink (akwụkwọ nke Malcolm Gladwell dere). Ọ na - agbaghasị amamikpe nke anyị na - eme kwa ụbọchị.
Tupu m gụọ Blink m gaara ekwu "jụọ ụyọkọ ndị mmadụ wee hụ nke ha chere na ọ kachasị mma" mana usoro mkpebi anyị bụ n'ezie ihe dị egwu. Ọ na-esiri gị ike ịme mkpebi ịzụ ahịa mgbe ị na-atụle nke a.
Maka m, Blink dị ka osisi ihe ọmụma na Bible. Amaghị m na agaghị m anọrịrị n'ọchịchịrị.